Rebuzz: fitantanana marketing amin'ny orinasa | Martech Zone
Rebuzz: fitantanana marketing amin'ny orinasa
Alakamisy Oktobra Oktobra 11, 2007 Alahady, Aogositra 23, 2009 Douglas Karr
Andian-teny buzz izay maty taona vitsivitsy lasa izay nefa mihombo indray ny heriny. Tiako ity teny nalaina avy tamin'ny mpanoratra Gerry Brown ity:
Zavatra iray no mazava na izany aza - ny dokam-barotra sy ny dokam-barotra dia mahatakatra fa ny tranonkala dia loharanom-baovao lehibe amin'ny tsena ary fantsom-pifandraisana mahery vaika ho an'ny mpanjifa mety. Rehefa matotra ny tsena ary mipoitra ireo mpitarika ny tsena dia hisy fihoaram-pefy haingana. Mety ho somary nohajaina ny CRM, fa ny vahaolana malalaka momba ny Marketing amin'ny Enterprise Marketing izay ampiasain'ny tranokala dia hanjary hatraiza hatraiza.
Manana Verizon PPC 6700 aho izay tiako ho nanao an'izany…
Andao hiditra amin'ny tambajotra sosialy